FAHAVITAN’NY RN7 : Niverina amin’ny laoniny ny famatsiana omby an’Antananarivo
Raha tsiahivina dia efa niteraka resabe teto an-toerana ny lafiny famarotana hen’omby. Nisy mantsy ny fepetra napetraky ny fanjakana tamin’ny taon-dasa iny mahakasika ny tsy tokony hamonoana ireo omby vavy sy ireo zanak’omby. Teo anatrehan’izany dia faritra vitsivitsy no efa tsy nahitana fivarotana hen’omby intsony. 1er février 2018
Tsy nijanona hatreo anefa fa mbola nitohy tamin’ity taona ity, izay olana teo amin’ny tsenan’ny omby izay, indrindra ho an’Antananarivo. Tsikaritra mantsy fa taoriana kely ny taom-baovao no nahitana fidangan’ny vidin’ny hen’omby teny an-tsena saika nanerana an’ Antananarivo.
Araka ny hita dia efa tafakatra hatrany amin’ny 12 000Ariary ny iray kilao tamin’izany. Tsy nisy tsy nitaraina araka izany, na ireo mpanjifa, na ireo mpivarotra noho ny tsy fisian’ny tsena. Tao anatin’ny tapa-bolana teo anefa izao dia efa nahitana fidinana sy nanomboka niverina tamin’ny laoniny izany, araka ny nambaran’ireo mpivarotra eny ifotony. Raha ny fantatra dia ny fahatapahan’ny lalana mianatsimo iny, izay tena mamatsy omby an’Antananarivo no nahatonga ny tsy fisian’ny omby ka nampiakatra izay vidiny izay. Amin’izao fotoana izao kosa dia efa tonga ara-dalàna ny omby, araka ny fanazavana hatrany. Tsara ny mampahafantatra fa ny “abattoir” na ny toeram-pamonoam-biby etsy Ampasika no mamatsy ny tapany atsimon’Antananarivo iray manontolo.
Ity toerana ity izay mahatonga omby 80 hatramin’ny 120 isanandro eo. Araka ny fanazavana nomen’ny mpamily fiara mpitondra omby iray dia 65 000Ariary no saran’ny fitondrana omby iray avy any Ambalavao mankaty Antananarivo.
Niakatra zato isan-jato anefa io sarany io satria lasa manao famindrana entana na “transbordement” ireo fiara lehibe vao tafita ny omby.
Amin’izao fotoana izao àry dia fantatra fa efa manodidina ny 8 000Ariary ka hatramin’ny 9 400Ariary no hakan’ireo mpaninjara ny kilaon’ny hen’omby any amin’ny mpamongady. Eo amin’ny 11 000Ar kosa ny hamarotana izany eny an-tsena, raha toa ka efa tafakatra hatrany amin’ny 10 000Ar ny vidiny nangalana tany amin’ny mpamongady teo aloha. Antenaina ahitana vidinany tahaka izany avokoa ireo entana maro hafa eny an-tsena izay mampitaraina ny vahoaka ankehitriny.